ऊर्जा मन्त्रीको प्रश्न- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन कति पटक पहल भयो ? – Nepal Japan
ऊर्जा मन्त्रीको प्रश्न- डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन कति पटक पहल भयो ?
– रमेश लम्साल ११ श्रावण ००:४५
मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “महसुल उठाउन हामीले कतिको सहजीकरण गर्यौं ? उद्योगी व्यवसायीसँग कति पटक छलफलमा बस्यौँ । उनीहरूलाई कति पटक आग्रह ग¥यौँ ? कुनै उपाय सुझायौँ ?” यो विषय कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री भुसालले जोड दिएर भन्नुभयो, “कुनै पनि कर्मचारी जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन, दिइँदैन ।” महसुल उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले जिम्मेवार भएर, विधि, पद्धति र कानूनअनुसार काम गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।